Madaxweynaha Jubbaland oo la kulmay xubno kamid ah Midowga Musharraxiinta – Kalfadhi
Madaxweynaha Jubbaland oo la kulmay xubno kamid ah Midowga Musharraxiinta
Madaxweynaha dowlada goboleedka Jubaland Axmed Madoobe ayaa shalay magaalada Muqdishu kula kulmay Guddoomiyaha Midowga Musharaxiinta ahna Madaxweyne hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud.
Mudane Axmed Madoobe, ayaa isla maalin ka hor kulan la qaatay Ra’iisal wasaarihii hore ee dalka, Xasan Cali Kheyre, Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Cabdqaadir Cali Cosoble oo ka mid ah Midowga Musharaxiinta.
Kulamada ayaa loogaga hadlay xaalada cakiran ee dalka iyo dadaalka xal ka gaarista doorashada oo uu madaxweynaha Jubbaland u yimid magaalada Muqdisho. Warar aan helnay ayaa sheegaya in xubnaha Midowga Musharraxiinta ay kala hadleen madaxweyne Axmed suurta-galnimada in shirka laga soo qeyb-geliyo musharraxiinta.
Midowga Musharraxiinta oo ka tacsiyeeyay geerida madaxweynihii hore ee dalka Cali Mahdi Maxamed